မဲဆန္ဒရှင် ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေ အလွန်နည်းပါးနေ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း မဲဆန္ဒရှင် ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေ အလွန်နည်းပါးနေ
A boy waves the National League for Democracy (NLD) party's flag during Myanmar opposition leader Aung San Suu Kyi's speech as she campaigns for the upcoming general election, in Loikaw capital city of Kayah state September 11, 2015. REUTERS/Soe Zeya Tun
မဲဆန္ဒရှင် ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေ အလွန်နည်းပါးနေ
လေ့လာစောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့ ၆၄ % လောက်မှာ မဲဆန္ဒရှင် ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကို မည်သူကမှ ဆောင်ရွက်နေတာကို မတွေ့ရဘူးလို့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေး လုပ်ဆောင်နေတဲ့ PACE က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
A boy waves the National League for Democracy (NLD) party’s flag during Myanmar opposition leader Aung San Suu Kyi’s speech as she campaigns for the upcoming general election, in Loikaw capital city of Kayah state September 11, 2015. REUTERS/Soe Zeya Tun
ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းဒေသကြီး အသီးသီးက မြို့နယ်ပေါင်း ၁၁၀ မှာ ၁၄ ရက်ကြာ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးတွေကို ပြုလုပ်ခဲ့အပြီး ယုံကြည်ရသော ရွေးကောက်ပွဲများ ပေါ်ပေါက်ရေး ပြည်သူများပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ PACE က ထုတ်ပြန်ကြေညာ လိုက်တာပါ။
ဒီအချက်အလက်တွေအရ ၃၄ % ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းမှာပဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲတွေက မဲဆန္ဒရှင်အသိပညာပေး လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ဆောင်နေတာကို တွေ့ရှိရတယ်လို့လည်း ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Previous articleမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို ဆက်လက်ပံ့ပိုး ကူညီပေးဖို့ ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကို မြန်မာအစိုးရက တိုက်တွန်း
Next articleကမ္ဘာ့တိရစ္ဆာန်များနေ့ အထိမ်းအမှတ် လမ်းလျှောက်ပွဲကို ရန်ကုန်မြို့မှာ လုပ်မယ်